Iyo beta 5 yewatchOS 5.2 uye tvOS 12.2 vagadziri | Ndinobva mac
Iyo Cupertino yakasimba yakavhura beta shanduro dzese dzayo dziripo OSs masikati ano. Mune ino kesi iyo vhezheni beta 5 yewatchOS 5.2 uye tvOS 12.2 iri zvakare mumawoko evanogadzira. Shanduro dzeIOS uye macOS dzakaburitswa nguva yapfuura nguva ino, uye ikozvino tine ese mavhezheni ari patafura.
Semazuva ese mune izvi zviitiko zvigadziridzo zvinotarisana zvakananga pa kuita, chengetedzo, uye kugadzikana kwesystem. Hazviratidzike sekuti tine shanduko huru mune zvimwe zvikamu uye mupfungwa iyi tinofanirwa kutaura kuti hapana mavhiki maviri apfuura kubva pakatangwa beta 4 vhezheni, kubvira payakatangwa svondo rapfuura ...
Betas vava pedyo nekuwana yavo yekupedzisira vhezheni
Mupfungwa iyi tinofanirwawo kutaura izvozvo munguva pfupi tichava neshanduro dzekupedzisira sezvo chirevo chinogoneka chemwedzi uno icho chiri "musimboti" chakagadzirirwa inotevera Kurume 25 chaizosundidzira kuvhurwa kweshanduro kune vese vashandisi. Chaizvoizvo hatina zuva rekusimbisa rechinhu chakakosha naApple asi vhezheni dze beta dzeOS dzakasiyana hatitende kuti dzinowedzera zvakanyanya.
Tichaona kumagumo kana idzi shanduro dzekupedzisira dzeMacOS, watchOS, iOS uye tvOS zvaburitswa asi hatifunge kuti zvichatora nguva yakareba kubvira vhezheni 5 yevagadziri yakasvika svondo mushure meiyo yapfuura, zvese zviri kufamba chaizvo. Muchiitiko chechimwe chinhu chinozivikanwa chinowanikwa mune idzi shanduro watchOS uye tvOS beta yevagadziri isu tichazotaurirana zvakananga muchinyorwa chino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » WatchOS 5 uye tvOS 5.2 beta 12.2 zvakare iri mumaoko evanogadzira
My Magic Trackpad 2 bhatiri rakafa, richaita marii kuchichinja?
Apple inoburitsa yechishanu beta ye macOS Mojave 10.14.4 yevagadziri